Izindiza ze-Toronto eziya e-Mont-Tremblant ku-Porter Airlines manje
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Izindiza ze-Toronto eziya e-Mont-Tremblant ku-Porter Airlines manje
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • ICanada Breaking News • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Izindiza ze-Toronto eziya e-Mont-Tremblant ku-Porter Airlines manje.
Esikhathini esingangemizuzu engama-70, abagibeli bangandiza besuka e-Billy Bishop Toronto City Airport baya e-Mont-Tremblant International Airport.
Isevisi yesizini yePorter Airlines iqala ngomhla ka-Disemba 17 futhi izosebenza kuze kube nguMashi 28, 2022.
Izindiza ezixhumayo ziyatholakala futhi ezindaweni ezahlukahlukene zase-Porter Airlines' zaseCanada.
Bonke abagibeli abaneminyaka engaphezu kwengu-12 nezinyanga ezine besuka esikhumulweni sezindiza saseCanada kufanele banikeze ubufakazi bokugoma ngaphambi kokugibela, kusukela ngoNovemba 30.
I-Porter Airlines iphinda yethula isevisi yayo yesizini e-Mont-Tremblant, Que., ngesikhathi samaholide. Isevisi yesizini iqala ngoDisemba 17, iqhubeke kuze kube nguMashi 28, 2022.
“Sesilungele ukubuyela endaweni yethu yokuqala yesizini kusukela siqale kabusha ukusebenza ngoSepthemba,” kusho uMichael Deluce, umongameli kanye ne-CEO, iPorter Airlines. “IMont-Tremblant iphakathi kwezindawo zokuqala uPorter aya kuzo ngesikhathi kusungulwa inkampani yezindiza, futhi abagibeli bethu bajabulela imisebenzi eyahlukahlukene yasebusika engayenza.”
Esikhathini esingangemizuzu engama-70, abagibeli bangandiza besuka e-Billy Bishop Toronto City Airport baya e-Mont-Tremblant International Airport. Izindiza ezixhumayo nazo ziyatholakala ezindaweni ezahlukahlukene zePorter. Ishejuli yasebusika ihlanganisa izindiza ezifika kwamane zamasonto onke.
Ngokulandela igunya likaHulumeni waseCanada lokugoma abagibeli bezindiza, bonke abagibeli abaneminyaka engaphezu kwengu-12 nezinyanga ezine besuka esikhumulweni sezindiza saseCanada kufanele banikeze ubufakazi bokugoma ngaphambi kokugibela, kusukela ngoNovemba 30.
Izindiza Zendiza iyinkampani yezindiza yesifunda enekomkhulu eBilly Bishop Toronto City Airport e-Toronto Islands e-Toronto, Ontario, Canada. Iphethwe yi-Porter Aviation Holdings, ngaphambili eyayaziwa ngokuthi i-REGCO Holdings Inc., i-Porter isebenzisa izindiza ezihleliwe njalo phakathi kwe-Toronto nezindawo zase-Canada nase-United States isebenzisa i-Canadian-built. I-Bombardier Q400 indiza ye-turboprop.